युरोपा लिग शुरु : चेल्सी र आर्सनलको ‘डेन्जर गेम’ कस्तो रहला ? «
युरोपा लिग शुरु : चेल्सी र आर्सनलको ‘डेन्जर गेम’ कस्तो रहला ?
प्रकाशित मिति : 20 September, 2018 12:00 pm
एजेन्सी । युरोपा लिग फुटबलको समूह चरणका खेलहरु आज (बिहिबार) बाट सुरु हुँदैछ । युरोपा लिगको समूह चरण अन्तर्गत आज १२ वटै समूहको दुई दुई खेल हुँदैछ ।
लिग अन्तर्गत आज हुने खेलमध्ये ६ समूहको खेलहरु नेपाली समय अनुसार १०:४० मा सुरु हुनेछ । अन्य ६ समूहको खेल राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ ।
युरोपा लिग अन्तर्गत आजै इन्ग्लिश क्लब चेल्सी र आर्सनलले आ-आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । त्यस्तै इटालियन क्लब एसी मिलान, स्पेनिस क्लब भिया रियल, सेभिया लगायतका चर्चित क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
सहज मानिएको समूह समूह ‘एल’ मा रहेको चेल्सीले ग्रिसको पिएओके क्लबविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । पिएओकेको मैदानमा हुने खेल राति १०:४० मा सुरु हुनेछ । यसै समूहको अर्को खेलमा बेलारुसको बाटे बेरिसोभ र हंगेरीको मोल भिडी एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
यस्तै समूह ‘ई’ को आर्सनलले युक्रेनको भोर्स्क्लासंग खेल्नेछ । आर्सनलको मैदानमा हुने खेल राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ । यसै समूहको अर्को खेलमा पोर्चुगलको स्पोर्टिङ लिस्बोनले अजरबैजानको क्वाराबागसंग खेल्नेछ ।
त्यस्तै समूह ‘एफ’ को एसी मिलानले लक्समवर्गको डुडलंज क्लबसंग खेल्नेछ । स्पेनिस क्लब भिया रियलले स्कटल्याण्डको रेन्जेर्ससंग खेल्दा सेभियाले बेल्जियमको स्टानडर्ट लिगसंग खेल्नेछ ।
माई सेकेण्ड टिचरले एक वर्षको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीलाई प्रायोजन गर्दै
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको जर्सीलाई मोबाइल एप्लिकेसन माई सेकेण्ड टिचरले गरेको छ । नेपाल क्रिकेट
नेपाल क्रिकेट संघ र वाइवाइको उत्पादक चौधरी ग्रुपबीच पाँच वर्षका लागि सम्झौता
नेपालको अन्डर नाइन्टीन पुरुष क्रिकेट टिमलाई वाइ वाइले प्रायोजन गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ
नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक कुवेतका नागरिक अब्दुल्लाह अलमुताइरी बने
नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक कुवेतका नागरिक अब्दुल्लाह अलमुताइरी बनेका छन् । चैत १८ गते बसेको
कोभिड नियन्त्रणमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक भएको : धिरेन शाक्य
दशरथ रंगशालामा चैत्र २८ गते देखि कोभिड कप–२०२१ आयोजना हुने भएको छ । कोभिडले थलिएका
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी सङ्गठनमा एउटा प्रणालीको विकास गर्न खोजिरहेको र नेपाल प्रहरीले
ओली र नेपालबीच भएको आजको भेटवार्तामा एकता जोगाउने अन्तिम प्रयास
नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको
स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना जारी गर्दै वैशाख मसान्तसम्म यी नियम पालना गर्न अनुरोध
कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख ३१ गतेसम्म नौवटा नियम पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले